Social ERP waxay gaadhay aduunka Open Source mahad LibertyaERP | Laga soo bilaabo Linux
El Bulshada ERP Waxay awood u siineysaa astaamaha codsiyada bulshada inay isku dhexgalaan howlaha maamulka, iyadoo la gaarayo isku dheelitirnaan kaamil ah dabacsanaanta iyo firfircoonida bulshada bulshada iyadoo lala jaanqaadayo iyo qaabeynta adduunka geeddi-socodka.
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn sababta Bulshada ERP ayaa noqotay mid si isa soo taraysa looga dalbaday ururada, waa inay sahlayso jaantusyada habsami-u-socodka shaqada (Mashruuca Ganacsiga) oo u oggolaanaya aqoonta uu shaqaale kasta leeyahay, in lagu daadiyo oo si nabadgelyo leh loogu wadaago barxadda (iyadoo laga fogaanayo xatooyo suurtagal ah ama daadinta macluumaad); iyadoo u sahlaysa shirkadda inay sameyso wax la taaban karo oo ay ilaashato raasamaalkeeda ugu qaalisan: aqoonta iyo aqoonta ganacsiga.
Markay shirkaddu doorato inay hirgeliso xalka Social ERP, waxay ku sharadaysaa horumarinta kooxaha shaqada iyo wada shaqeynta xubnaheeda. Waxaad leedahay hantidaada ugu qaalisan waa aqoon wadaag. Maaddaama falsafaddan ay sidoo kale tahay mid ka mid ah tiirarka il furan, waxay umuuqataa tallaabo dabiici ah in la raaco. ”, Ayuu sharraxay Mario Mauprivez, Isuduwaha Guud ee LibertyaERP.
Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ay bixiso isdhexgalka ka dhexeeya ERP iyo codsiyada bulshada waa la muujin karaa:
Dhis saldhig aqoon wadaag ah.
Toos u sameynta go'aan qaadashada isla markaana yareyso hubin la'aanta.
Kordhi wax soo saarka iyo dareenka lahaanshaha.
Hagaajinta iskaashiga iyo jawiga shaqada gudaha.
Abuur isgaarsiin firfircoon oo firfircoon.
Isbeddelkan cusub wuxuu calaamad u yahay isbeddelka cusub ee nidaamyada maareynta, sidoo kale wuxuu saameyn weyn ku leeyahay habka aragtida iyo fikirka labada shirkadood iyo qaababka shaqada.
Si aad u soo dejiso, bilaash, nooca 15.03 ee LibertyaERP tag: www.libertya.org
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Social ERP waxay gaadhay aduunka Open Source mahadsanidiisa LibertyaERP
Waxyaabaha OCA ma ahan kuwo la ogaan karo.
Tilmaam si aad u rakibtid oo aad u hagaajiso Xiddigaha CentOS 6.6
Khiyaanooyinka wicitaanada WhatsApp